CC Shakuur oo weerar ku qaaday Wasiirka Warfaafinta | KEYDMEDIA ONLINE
CC Shakuur oo weerar ku qaaday Wasiirka Warfaafinta
Hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya, Cusmaan Abuukar Dubbe, ku eedeeyay in uu ka been sheegayo dhalinyarada Soomaaliyeed ee lagu baabi’yay gudaha dalka Itoobiya.
MUQDISHO, Soomaaliya - Cabdiraxmaan Cabdishakuur, ayaa Wasiira Warfaafinta DF Dubbe ku tilmaamay nin aan afkiisa iyo dhegihiisu is maqal, wuxuuna barbar dhigay nin Madaxweynihii hore ee Ciraaq, Sadaam Xuseen u qaabilsanaa warfaafinta Maxamad Saciid Saxaaf.
Hoggaamiyaha Wadajir ayaa yiri: “Wasiirkani wuxuu i soo xusuusiyey nin xilligii uu Sadaam Xuseen sii dhacayey warfaafinta u qaabilsanaa oo Maxamad Saciid Saxaaf la oran jiray. Wuxuu caan ku ahaa in afkiisu iyo dhegihiisu is maqal. Ninkani waa sidii oo kale, wuxuu dafirayaa in wiilal Soomaaliyeed tababar loogu qaaday Eritrea, haddana wuxuu beeninayaa in wiilashaasi dagaalka Gobolka Tigreega ka socda ku go’een”.
Wasiirka Warfaafinta, oo xalay muuqaal uu soo duubay laga baahiyay warbaahinta Qaranka ayaa beeniyay wararka sheegaya in dhalinyaro tababar loo diray ay ka qeyb qaateen dagaalkii ka dhacay Itoobiya, gaar ahaan Gobolka Tigreega.
Ilaa hadda Dowladdu wax caddayn ah oo ku saabsan nolosha dhalinyaradaas ay beenisay geeridooda sooma bandhigin, waxaana sii kordhaca waalidka warbaahinta kasoo muuqanaya ee dalbanaya in dowladdu ay caruurtooda nolol iyo geeri middood meel ugu sheegto.
Sida ay horey u baahisay Keydmedia Online, taliyaha Ciidanka Militariga Itoobiya qeybta Oromada Generaal Adem Mohamed iyo taliyaha Ciidanka Sirdoonka Eriteriay Mekonen ayaa dhawaan arintan u yimid Muqdisho, iyagoo xarunta taliska NISA ee Habar Khadiijo kulan kula yeeshay Fahad Yaasiin oo dhilinyaradaan gacantiisa ku qoray.